နိုင်ရိုဘီ ၊ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ် နိုင်ငံ မှ တောင်ဆူဒန် နိုင်ငံ အား ကူညီထောက်ပံ့ပေး သည့် အရေးပေါ် စားနပ်ရိက္ခာ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား ကို စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် ၌ တောင်ဆူဒန် နိုင်ငံ မြို့တော် ဂျူဘာ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့သည်။
သမီး - ဖေဖေ၊ သမီးတို့က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရော လိုက်နာရဲ့လားဟင် ?
ဖခင် - သေချာတာပေါ့
သမီး - ဒါဆို ဘာကြောင့် သမီးတို့က သဘောတူညီချက်တွေအများကြီးကို ချိုးဖောက်ကြတာလဲဟင် ?
သမီး - ဖေဖေ၊ သမီးတို့က သိပ္ပံပညာကိုရော လေးစားမှုရှိရဲ့လားဟင် ?
ဖခင် - သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး
သမီး - ဒါဆို လူတွေက ဘာကြောင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကုသဖို့ ပိုးသတ်ဆေးသုံးနိုင်တယ်လို့ ပြောတာလဲဟင် ?
သား - ဖေဖေ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံက တာဝန်သိတဲ့နိုင်ငံရော ဟုတ်ရဲ့လားဟင် ?
သား - ဒါဆို သားတို့က ဘာကြောင့် WHO ရန်ပုံငွေကို ဖြတ်တောက်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ရတာလဲဟင် ?
သမီး - ဖေဖေ၊ သမီးတို့က လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကို အခြားသူတွေထက် ပိုတန်ဖိုးထားလားဟင် ?
ဖခင် - သိပ်သေချာတာပေါ့
သမီး - ဒါဆို ဘာကြောင့် လူမည်းတွေရဲ့ အသက်တွေလည်းအရေးကြီးပါတယ် ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ
သား - ဖေဖေ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးလားဟင် ?
ဖခင် - မြတ်နိုးတာပေါ့
သား - ဒါဆို သားတို့ သမိုင်းဆရာတော့ မှားနေပြီ။ ဆရာကပြောတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံက နှစ်ပေါင်း ၂၄၀ ကျော်
အတွင်း စစ်မတိုက်တာ ၁၆ နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်တဲ့။
သား - ဖေဖေ၊ သားတို့ကိုယ်တိုင်မှာရော ယုံကြည်မှုရှိရဲ့လားဟင် ?
ဖခင် - သေချာပေါက်ရှိတာပေါ့
သား - ဒါဆို ဘာကြောင့် ပြိုင်ဘက်တွေကို အကျပ်အတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာလဲဟင် ?
သား - ဖေဖေ၊ သားတို့က အကောင်းဆုံး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကို လုပ်နေတာလားဟင် ?
သား - ဒါဆို ဘာကြောင့် သားတို့က COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်နေတာလဲဟင် ?
သား - ဖေဖေ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံက လူ့ကျင့်ဝတ် တန်ဖိုးထားတဲ့နိုင်ငံလားဟင် ?
သား - ဒါဆို ဘာကြောင့် သားတို့က အမြဲတမ်း အခြားနိုင်ငံတွေကို ပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်နေတာလဲဟင် ?
သား - ဖေဖေ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံက ရိုးသားဖြူစင်တဲ့နိုင်ငံလားဟင် ?
ဖခင် - မှန်တာပေါ့
သား - ဒါဆို ဘာကြောင့် PRISM နဲ့ ECHELON တို့လို စောင့်ကြည့်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေ ရှိနေတာလဲဟင် ? (Xinhua)